Abasebenzi bethu kwiMyuziyam yaBantwana yaseWilmington bakholelwa kumandla omntwana ngamnye ofunda ngokudlala. Yiyo loo nto sizama ukubonelela zonke iimfuno zeendwendwe ngokubonelela ngemali, ngokomzimba, ngokweemvakalelo, nangofikelelo lobukrelekrele kwindawo eyamkelekileyo nekhuselekileyo. Siqhubeka sifunda kwaye sisebenzisana noluntu lwasekuhlaleni olusixhasayo kulo msebenzi. Ngeendawo zokuhlala, imibuzo, okanye izimvo, nceda uqhagamshelane nathi ku- 910-254-3534 ext. 106!
Iingcali zonyango kunye nabanonopheli
Iingcali zonyango kunye nabanonopheli bafumana itikiti lokungeniswa xa bekhapha umxhasi ohlawulayo ofuna uncedo lwezonyango okanye lomzimba ngexesha lotyelelo lwabo kwiMyuziyam. Nceda ufowunele i-Front Desk yethu ku- (910) 254-3534 ukugcina itikiti lokungena elincomekayo phambi kotyelelo lwakho.
Imephu yezandi zovakalelo
Le mephu iqaqambisa inqanaba lesandi esifunyanwa kwimiboniso yethu.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba xa iMyuziyam ixakeke kakhulu, kokukhona izithuba zemiboniso ziba namandla. Nceda ubone idesika yethu yangaphambili ukuba kukho umntu okwiqela lakho ofuna indawo ezolileyo ngexesha lotyelelo lwakhe okanye unomdla wokujonga ii-headphones zethu ezisusa ingxolo.
Imephu yeSandi yeMyuziyam yeCVD, cofa apha .
Imephu yeSandi yeMyuziyam, cofa apha .
Speech Therapy Play Guide
Esi sikhokelo siyimveliso yokuba ingcali yezifo zengqondo yasekuhlaleni ihambe kwiMyuziyam kwaye ichaze indlela abanokusebenzisa ngayo isithuba sonyango lokuthetha. Injongo kukubonelela ngenkcazo yendlela abantwana abanokusebenza ngayo ekuphuhliseni intetho yabo ngexesha lotyelelo lwabo kwiMyuziyam. Isikhokelo asiphelelanga kodwa sinika isiqalo sendlela umboniso ngamnye ongasetyenziswa ngayo. Cofa apha.
Amabali ethu oluntu enzelwe ukunceda umntwana wakho, umhlobo, okanye ilungu losapho lilungiselele utyelelo lwabo kwiMyuziyam. Inguqulelo yesiNgesi iyafumaneka apha. Inguqulelo yeSpanish iyeza kungekudala.
Ingxolo yokuCima ii-headphones
Okwangoku sinee-headsets ezimbini ezilungelelanisiweyo zabantwana kwidesika yethu yangaphambili ekhoyo ukuze kujongwe kuqala ukuza, kuqala ukukhonza.
Iingxowa zeemvakalelo Kuza ngokukhawuleza!
Sikwinkqubo yokudala iingxowa zoluvo eziya kufumaneka ukuba zijongwe kwidesika yethu yangaphambili. Isikhwama siya kubandakanya izinto ezithuthuzelayo kunye ne-tactile eziza kunceda iindwendwe zilawule ukusetyenzwa kweenzwa ngexesha lokutyelela.
Sinesitulo esinamavili kunye nesango lokungena elifikelelekayo elikwicala leMyuziyam, elijongene ne-2nd Street. Lo mnyango uhlala utshixiwe ngeeyure zomsebenzi. Xa umxhasi efika emnyango, baya kucofa iqhosha le-intercom eliya kwazisa idesika engaphambili. Umqeshwa uya kuphendula nge-intercom kwaye eze ngokwakhe ukuza kuvula ucango.
IMyuziyam ikwiDowntown Wilmington kwaye ayinayo indawo yokupaka ekhethiweyo. Iindawo zokupaka ezikufutshane eziphawulweyo ezifikelelekayo kubaxhasi abanepleyiti yelayisensi yokupaka efikelelekayo okanye ithegi yokuxhoma zikwindawo yokupaka iHannah Block USO ehlawulweyo kwi-118 S. 2nd St. Iindawo zixabisa i-$1.00 ngeyure kwiiyure ezintlanu zokuqala kunye ne-$8.00 ye-24 iiyure. Abaxhasi abaneepleyiti zephepha-mvume lokupaka ezifikelelekayo okanye iithegi ezijingayo banokupaka simahla nakwesiphi na isithuba esinemitha esitratweni kangangexesha elingasikelwanga mda. Izitalato ezinemvume yokuhlala ezithintelweyo azibandakanywa. Funda ngakumbi malunga nezalathiso kunye neendawo zokupaka apha.
IsiKhokelo sokudlala seSensory Kuza ngokukhawuleza!
Sikwiphulo lokudala isikhokelo sokudlala esinezivo kunye neTherapistyasekhaya ye-Occupational T.Esi sikhokelo sokudlala singasetyenziswa ziintsapho kunye nonyango ukudibanisa iindlela zokudlala zonyango ngelixa undwendwela iMyuziyam. Isikhokelo asiyi kuba sibanzi, kodwa sinikezela ngesiqalo sendlela umboniso ngamnye ongasetyenziswa ngayo.
IMyuziyam inendawo yokutshixa yasimahla efumanekayo enemilinganiselo eyi-12x12x16”.
Iindawo zangasese ziyafumaneka kwinqanaba ngalinye leMyuziyam. Izindlu zangasese ezikhethiweyo zinezikhululo zokutshintsha abantwana.
Sinamashwamshwam namanzi afumanekayo ukuze sithengelwe kwidesika yethu engaphambili. Ngaphandle kokutya kunye nesiselo zamkelekile ukuba zityiwe kwiNtendelezo yethu okanye kwigumbi leBhonasi xa uceliwe.
Sine-elevator kunye neerempu ezibonelela onke amanqanaba eMyuziyam, ngaphakathi nangaphandle.
Ukunyuswa kwesitulo esinamavili kuyafumaneka ukuze ungene kwinqanawa yethu yamapirate, Igumbi lobugcisa, kunye neGumbi leBonus. Nceda ucele uncedo kwidesika engaphambili.